सुनको मूल्यमा फेरि नयाँ रेर्कड : तोलाको कति ? - खबर प्रवाह::Khabarprawaha.com सुनको मूल्यमा फेरि नयाँ रेर्कड : तोलाको कति ? - खबर प्रवाह
काठमाडौ। नेपाली बजारमा सुनको मुल्यमा नयाँ रेर्कड कायम भएको छ। बुधबारको तुलनामा पुनः बिहीबार सुन प्रतितोला ५ सय रुपियाँले बढेर ७७ हजार ६०० मा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महाँसघले जनाएको छ।
यस्तै तेजावी सुनको मुल्य ७७ हजार ३ सयमा कारोबार भइरहेको छ। त्यस्तै चाँदीको मुल्य १० रुपैयाले बढेर प्रतितोला ९ सय १५ रुपैयामा कारोबार भइरहेको जनाएको छ।
मन्त्री बास्कोटालाई बर्खास्त नगरे आन्दोलनमा उत्रिने नेविसंघको चेतावनी
सञ्चारमन्त्रीलाई राजीनामा गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
काठमाडौँ।स्थानीय बजारमा पहेंलो धातुको मूल्य आज प्रतितोला रु एक हजार ३०० ले ओरालो लागेको छ । पछिल्ला केही दिनमा लगातार उकालो लागेको सुनको मूल्यमा आज भने एकै पटक ठूलो मात्रामा ह्रास देखिएको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले आजका लागि छापावाला सुन प्रतितोला रु ९५ हजार ४०० मा बिक्री गर्ने गरी मूल्य निर्धारण गरेको छ […]
काठमाडौं । सहकारी संस्थाहरूले कुल कर्जाको एक प्रतिशतभन्दा बढी सेवा शुल्क लिन नपाउने भएका छन् । सहकारी विभागले आगामी १ माघबाट लागू हुने गरी एक प्रतिशतभन्दा बढी सेवा शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गरेको हो । विभागले तोकेको सेवा शुल्कअनुसार प्रारम्भिक संस्थाले ऋणीलाई प्रवाहित गरेको कुल कर्जाको एक प्रतिशतभन्दा बढी सेवा शुल्क लिन पाउनेछैनन् । सहकारी […]
स्थानीय बजारमा आज सुनको मूल्य प्रतितोला रु एक हजार ६०० ले उकालो लागेको छ । बुधबारका तुलनामा आज छापावाला सुन प्रतितोला रु एक हजार ६०० ले वृद्धि भई रु ९२ हजार ६०० मा कारोवार भएको छ । बुधबार छापावाला सुनको मूल्य प्रतितोला रु ९१ हजारमा कारोवार भएको थियो । यस्तै, तेजाबी सुन पनि तोलामा रु […]
स्थानीय बजारमा सुनको मूल्यमा आज प्रतितोला रु एक हजार ८०० ले ओरालो लागेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार आज छापावाला सुन प्रतितोला रु ९२ हजार ५०० मा कारोबार भएको छ । सोमबार प्रतितोला रु ९४ हजार ३०० मा कारोबार भएको छापावाला सुन आज रु एक हजार ८०० ले ओरालो लागेको हो । यस्तै […]
काठमाडौँ । स्थानीय बजारमासुनको मूल्यमा आज सामान्य वृद्धि भएको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार छापावाला सुन प्रतितोला रु ३०० ले वृद्धि भएको छ । शुक्रबार पहेँलो धातु प्रतितोला रु ९४ हजारमा कारोवार भएकामा आज रु ९४ हजार ३०० पुगेको छ । यस्तै तेजाबी सुन शुक्रबार प्रतितोला रु ९३ हजार ५०० मा कारोवार भएकामा […]
सुनसरी जिल्ला स्थित बराहक्षेत्र नगरपालिकाका एक किसान स्थानीय जात तथा कडकनाथ कुखुरा पालनमा जोड दिइरहेका छन् । बिरलै पाइने कडकनाथ जातकाे कुखुरा पालेर उनि उदाहरण बनेका छन् । झन्डै एक हजार कुखुरा पालेका बराहक्षेत्र –३ भानुटाेलका राजेन्द्र कुमार तामाङ स्थानीय जातका कुखुराका साथै कडकनाथकाे माग अत्यधिक रहेकाले अझ थप्ने तयारी समेत गरिरहेका छन् । कालो […]